Desogestrel Pulver For Sale (54024-22-5): Reviews & Dosage & Effects | AASraw
Desogestrel Pulver For Sale: Reviews & Dosage & Effects
/Blog/Desogestrel/Desogestrel Pulver For Sale: Reviews & Dosage & Effects
Posted on 06 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Desogestrel. Manana izany 0 Comment.
Everything about Desogestrel Powder
1.Desogestrel 54024-22-5 Overview
2.Desogestrel Powder Review
3. Mechanism Of Action-Desogestrel Pulver
4.Ho ny fampiasana ny poety fanosehana?
5. Desogestrel Powder Dosage
6. Iza no afaka mampiasa ny vovoka Desogestrel?
7. Ny tombony sy ny tsy fetezana-Desogestrel Powder
8.Desogestrel poeta Side Effects
9.Desogestrel Pulver Ny fiantraikany amin'ny fampinonoana
10.Desogestrel Pulver For Sale
Lahatsary vovoka poizina
I.Desogestrel parasitera Characters:
Name: Vovon-drivotra desogestrel
Formula Molecular: C22H30O
Meny fitetezana 310.47
Melt Point: 109-110 ° C
Storage Temp: -20 ° C Frizidera
1. Desogestrel 54024-22-5 Overview
Desogestrel ary ny kombina etioly estradiol dia ampiasaina mba hisorohana ny vohoka. Ny pilina fantsom-piterahana izay misy karazana hormones roa, desogestrel ary estinylol dia manakana ny fitondrana vohoka. Miasa amin'ny alàlan'ny fampijanonana ny atodin'ny vehivavy iray amin'ny fivelarany tanteraka isam-bolana. Ny atody dia tsy afaka manaiky intsony ny sira sy ny fampiroboroboana (fitondrana vohoka).
Tsy misy fomba fifanoherana ny 100 isan-jato. Ny fomba fanaraha-maso ny fiterahana toy ny fandidiana fandidiana mba hahatonga azy ho marary na tsy fanaovana firaisana dia mahomby kokoa noho ny pilina fanafody. Ifanakalozy hevitra ny safidinao momba ny fiterahana amin'ny dokotera.
Io fitsaboana io dia tsy manakana ny VIH na aretina azo avy amin'ny firaisana. Tsy hanampy amin'ny fanabeazana aizana maivana izany, toy ny aorian'ny fifandraisana tsy voaaro. Ny dokotera ihany no mahazo anao.
2. Desogestrel Powder Review
Product Name Vovon-drivotra desogestrel
CAS Number 54024-22-5
Molecular Formula C22H30O
Molecular Weight 310.47
Melt Point 109-110 ° C
3. Fomba fiasa Of Action—Desogestrel Powder
Mifatotra amin'ny progesterone sy estrogen receptors. Ny sela taranja dia ahitana ny taratasy mivalona momba ny fananahana, ny trondro madinika, ny hypothalamus ary ny pitipoa. Vantany mifandray amin'ny receptor, ny progestins toy ny desogestrel dia hampiadana ny hafatr'ilay fanafahana ny hormone gonadotropine (GnRH) avy amin'ny hypothalamus ary mibaribary ny fipoahan'ny alikaola (Luteinizing hormone) mialoha ny ovulatory.
Ny desogestrel dia ampiasaina amin'ny fanabeazana vehivavy. Ny Desogestrel dia endrika progestin na endrika amam-bika avy amin'ny hormone mahazatra vehivavy vehivavy, progesterone. Ao anatin'ny fotoam-pisakafoana mahazatra ny vehivavy, misy atody matotra ary navotsotra avy amin'ny ovaires (ovulation). Ny ovaire dia mamokatra ny progesterone, izay misakana ny famoahana atody hafa sy ny fiterahana ny kibo ho an'ny bevohoka. Raha mitrosa ny bevohoka dia mihamitombo hatrany ny habetsaky ny progesterone ao amin'ny vatana ary mihazona ny fatorana. Raha tsy mitranga ny fitondrana vohoka, dia mitombo ny habetsaky ny progesterone ao amin'ny vatany, ka miteraka fotoana fohy. Ny desogestrel dia manadino ny fizotran'ny vatana amin'ny fieritreretana fa efa nisy ny fambolena, tamin'ny fihazonana ny haavon'ny halavan'ny progesterone. Izany dia misakana ny famoahana atody amin'ny ovy.
4. Ahoana ny fomba fampiasana ny poety desogestrel?
Zava-dehibe ny hampiasanao an'io fanafody io araka ny torolalan'ny dokotera anao. Aza mampiasa azy bebe kokoa, aza mampiasa azy matetika, ary aza mampiasa azy io mandritra ny fotoana lava kokoa noho ny tenin'ny dokotanao.
Ampiasao ny fampiasana fanandramana orina ho azo antoka sy azo antoka araka izay azo atao, tokony ho azonao ny fomba sy ny fotoana itondrana azy ireo ary ny fiantraikany mety hitranga.
Ity fanafody ity dia mitondra torolàlana marary. Vakio sy araho tsara ireo torolalana ireo. Anontanio ny dokotera na ny pharmacista raha manana fanontaniana ianao.
Ity fanafody ity dia azo jerena ao anaty kitapo marevaka miaraka amin'ny mpanolotra takelaka. Ny kitapom-batana tsirairay dia misy tabilao 28 misy loko samihafa izay tokony horaisina amin'ny lamina mitovy arak'izay arahina ao amin'ny kitapo moka.
Rehefa manomboka mampiasa io fitsaboana io ianao, dia mitaky andro vitsivitsy farafahakeliny 7 ny vatanao alohan'ny hanohanana ny fitondrana vohoka. Ampiasao ny endrika fanabeazana hafa (ohatra, ny kapaoty, ny spermicide, na ny diaphragma) amin'ny andro voalohany 7 amin'ny pills.
Take DesogestrelPowders miaraka amin'ny fotoana iray isan'andro. Ny fitsaboana amin'ny fiterahana dia miasa tsara raha tsy mihoatra ny ora 24 dia mandalo eo amin'ny doses.
Aza misalasala na mitazona ny pilinao amin'ny ora maherin'ny 24. Raha tsy mitandrina ny doka ianao, dia mety ho bevohoka. Anontanio amin'ny dokotera ny fomba hanampiana anao hahatsiaro ny fanafody na ny fomba fampiasana fomba fiterahana hafa.
Mety hahatsiaro ho marary na voan'ny aretin-tsaina ianao, indrindra fa mandritra ny volana vitsivitsy voalohany azonao anaovana an'io fanafody io. Raha mitohy tsy mihinan-kanina ny tsy mihinana anao dia antsoy ny dokotera.
Araho ny torolàlana ao amin'ny taratasy fangatahana marary na miantsoa ny dokotera raha toa ka mamono na manana aretim-pivalanana ianao ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny ora 4 amin'ny fitsaboana an'io fanafody io. Mitandrema izany ho doka tsy voavaly.
Aza mihinana grapefruit na misotro sipa japoney raha ampiasainao io fanafody io. Ny voankazo sy grapefruit dia mety hanova ny habetsahan'ny fanafody entina amin'ny vatana.
Ny fahasamihafana amin'io fanafody io dia tsy mitovy amin'ny marary hafa. Araho ny baikon'ny dokotera na ny torolàlana eo amin'ilay marika. Ny fampahalalana manaraka dia tsy ahitana afa-tsy ny dòz faran'ny fitsaboana. Raha tsy mitovy ny dosinao dia aza manova izany raha tsy miteny aminao ny dokoteranao.
Ny habetsaky ny fitsaboana izay raisinao dia miankina amin'ny herin'ny fanafody. Ankoatr'izay, ny isan'ireo dingana izay alainao isan'andro, ny fotoana ahafahana mifandray eo amin'ny dosia, ary ny halavan'ny fotoana alehanao dia miankina amin'ny olana ara-pahasalamanao izay ampiasanao ny fanafody.
Ny dokotera dia mety hangataka anao hanomboka ny doka amin'ny andro voalohan'ny vanim-potoanao (antsoina amin'ny andro 1) na ny alahady voalohany aorian'ny fanombohan'ny fe-potoan'ny reny Alahady nanomboka). Rehefa manomboka amin'ny andro iray ianao dia zava-dehibe ny hanarahanao izany fandaharam-potoana izany, eny fa na dia tsy misy doka aza. Aza manova ny fandaharam-potoanao amin'ny tenanao manokana. Raha toa ka tsy mety ny fandaharam-potoanao, dia resaho amin'ny dokoteranao ny momba azy io. Ho an'ny fanombohana alahady, mila mampiasa karazana fanaraha-maso ny fiterahana ianao (ohatra ny kapaoty, diaphragm, spermicide) ho an'ireo andro voalohany 7.
Tokony hanomboka ny fitsaboana manaraka sy ny rehetra manaraka ny andro fitsaboana 28 andro fitsaboana andro iray amin'ny herinandro raha nanomboka ny fitsaboana voalohany ary manaraka ny fandaharam-potoana mitovy.
Ho an'ny endrika dosie orana (tablette):
♦ Ho an'ny fampandrosoana (mba hisorohana ny vohoka):
• Ny olon-dehibe sy ny zatovo dia misy tabilao misy marika mavitrika (mavitrika) atao isan'andro isan'andro amin'ny andro manaraka 21 arahin'ny takelaka maitso iray (inerta) isan'andro mandritra ny andro 7 isaky ny vanim-potoan'ny menstrual.
· Ny fampiasana ankizy sy fampiasana ankizy dia tsy maintsy ampidirin'ny dokotera.
Antsoy ny dokotera na ny mpanamboatra fanafody. Izany fanafody izany dia manana torolàlana manokana momba ny zavatra tokony hataonao raha tsy mitandrina ny doka. Vakio sy araho tsara ireo torolalana ireo ary antsoy ny dokotera raha manana fanontaniana ianao.
Ampiasao ny fomba faharoa fanaraha-maso ny fiterahana mandritra ny 7 andro aorian'ny tsy andananao dôzama mba hisorohana ny vohoka.
Ataovy azo antoka fa fantatry ny dokotera raha tsy mitandrina ny volana 2 volana maromaro ianao, satria midika izany fa bevohoka ianao. Mety tsy manam-potoana ianao amin'ity volana ity raha tsy mihoatra ny doka iray ianao na manova ny fandaharam-potoanao.
Azonao atao ny miala amin'ny làlan-koditra na tsikirity raha tsy maka pilina ara-potoana ianao. Ny fanafody tsy azonao, dia azo inoana kokoa fa tsy maintsy mihintsana ianao.
♣ Raha tsy mahita pentina jiro hazavana ianao: Alao ny pilina haingana araka izay tratra ary alao ny pilina manaraka amin'ny fandaharam-potoana tsy tapaka.
♣ Raha tsy misy pills amin'ny hazavana Orange ianao amin'ny herinandro 1 na 2: Raiso ireo pilina roa faran'izay haingana sy ireo pilina roa manaraka ny ampitso. Tohizo ny maka pilina iray isan'andro isan'andro mandrapahavitanao ilay entana. Ampiasao ny fomba faharoa fanaraha-maso ny fiterahana (ohatra, condom, spermicide) mandritra ny 7 andro aorian'ny tsy andananao dôzina.
♣ Raha tsy misy pills amin'ny hazavana maivana amin'ny herinandro 3 ianao, na raha tsy mitandrina pizza telo na maromaro ao anatin'ny herinandro ianao:
• Manomboka andro ny 1: Atsipazo ny sisa amin'ny poketra ary manomboka fonosana vaovao amin'io andro io.
• Alatsinainy alahady: Tohizo ny pilao iray isan'andro ary mandrapahatongan'ny alahady, ary atsaharo ny ambiny rehetra ary manomboka fonosana vaovao amin'io andro io. Ampiasao ny fomba faharoa fanaraha-maso ny fiterahana (ohatra, kapaoty, spermicide) ho an'ny 7 andro aorian'ny tsy andananao dôzina, mba hisorohana ny vohoka. Raha tsy mitandrina ny fotoam-panitsiana mandritra ny fe-potoam-paolana 2 volana ianao, dia jereo amin'ny dokotera satria mety bevohoka ianao.
♣ Raha tsy mahita pills maitso ianao amin'ny herinandro 4: Atsaharo ireo pills izay tsy azonao. Tohizo ny maka pilina iray isan'andro isan'andro mandrapahavitanao ilay entana.
6. Iza no afaka mampiasa ny Desogestrelvovoka?
Ny ankamaroan'ny vehivavy dia afaka mampiasa ny vovobony desogestrel, saingy mety tsy ho vitanao izany raha:
• eritrereto hoe mety ho bevohoka ianao
• Aza maniry ny hiova
Maka fanafody hafa mety hisy fiantraikany eo amin'ny pilina
• dia miteraka rà mandriaka tsy tapaka eo anelanelan'ny vanim-potoana na aorian'ny fanaovana firaisana ara-nofo
• Nihanitatra ny aretim-piaramanidina na aretim-po na nokleary
• manana aretina ny aty
• voan'ny kanseran'ny nono na efa nanao izany taloha
• manana sirrhosis na marary mafy
• Raha salama ianao ary tsy misy antony ara-pahasalamana, nahoana ianao no tsy tokony handray ny vovoka poezia, dia azonao atao izany mandra-pahatongan'ny menopause anao na mandra-pahatongan'ny 55.
Ny vovo-dronono dipoavatra dia azo antoka fa ampiasaina raha mampinono. Vetivety dia mety hiditra ao amin'ny rononon-dreninao, saingy tsy manimba ny zanakao izany. Tsy misy fiantraikany amin'ny fomba famokarana ny nono.
Na dia tsy dia azo antoka loatra aza, dia kely dia kely ny fahafahanao ho bevohoka rehefa mandray ny vovoka poezia.
Raha mitranga izany, dia tsy misy porofo fa hanisy ratsy ny zanakao ny zaza. Raha mieritreritra ianao fa bevohoka, dia miresaha amin'ny GP anao na mitsidika ny hopitaly fanabeazana anao ao an-toerana.
Manome torohevitra ara-pitsaboana raha misy fanaintainana tampoka na tsy fahita firy ao amin'ny vombonao, na raha toa ka mihenina kokoa na mihamaharitra ny fe-potoanao fa tsy mahazatra. Azo atao ny mampitandrina ireo famantarana momba ny fitondrana vohoka, na dia tsy fahita firy aza izany.
Tsy manelingelina ny firaisana izy io Mety tsy hisy fe-potoana ara-potoana rehefa mandray izany - ny fotoana dia mety maivana kokoa, matetika kokoa, na mety hijanonana tanteraka, ary mety ho hitanao eo anelanelan'ny vanim-potoana
Azonao ampiasaina izany rehefa mampinono Tsy hiaro anao amin'ny STIs izy io
Tsara raha tsy afaka mitondra ny hormone estrogen ianao, izay ao anatin'ny pilina mitambatra, ny pataloha ary ny vaginal Tokony ho tadidinao ny handray izany amin'ny fotoana iray na isan'andro
Azonao ampiasaina amin'ny vanim-potoana rehetra izany - na dia mifoka sigara aza ianao ary mahatratra 35 medikaly sasany, anisan'izany ny sasany (mahazatra) antibiotika, dia mety hahomby kokoa
8. Desogestrel Pulver Side Effects
Mitadiava fanampiana ara-pahasalamana raha misy famantarana momba ny tsy fahampian-tsakafo: hives; fialam-boly sarotra; fihenan'ny tarehinao, molotra, lela, na tenda.
Atsaharo ny fampiasana fanafody amin'ny fiterahana ary miantso ny dokotera avy hatrany raha toa ka:
• Ny mari-pandrefesana na ny fahalemena tampoka (indrindra amin'ny lafiny iray amin'ny vatana), tampan-doha henjana mafy, kabary miverimberina, olana amin'ny fahitana na ny fandanjana;
• marika famantarana ny rà mandriaka ao amin'ny fanaintainan'ny havokavoka, kohaka tampoka, midedadeda, mifoka rivotra, manasitrana rà;
• marika famantarana ny rà mandriaka ao amin'ny tongotrao, fanaintainana, hafanana, na moka amin'ny tongotra na amin'ny tongotra roa;
• Ny fanaintainan'ny fo-ny fanaintainana amin'ny tratra na ny tsindry, ny fanaintainana amin'ny valanoranonao na ny soroka, ny mitefoka, ny hatsembohana;
• Ny olana aty an-doha-ny fanaintainan'ny vavony mafy, ny tazo, ny fahatsapana reraka, ny fahaverezan'ny fandevenana, ny fivalanana maizim-borona, ny lokon-jiro, ny jiro (manopy ny hoditra na ny maso);
• fiovana amin'ny loha na ny harefo ny aretin'andoha miaro amin'ny aretina;
• midobodoboka eo amin'ny tananao, kitrokely na tongotra;
• volo kibo; na ny soritr'aretin'ny fahaketrahana-ny olana momba ny torimaso, ny fahalemena, ny fahatsapana reraka, ny fiovan'ny fihetsehampo.
Ny voka-dratsiny dia mety ahitana:
♦ fanasan-tongotra na teboka vinaingitra;
• Miala tsiny (indrindra raha vao manomboka mandray io fanafody io ianao), mamindra, mitebiteby;
• Fiovana na lanjany;
• fanetren-tena na fihenjanana;
• Endrika saro-bidy na fanamafisana ny hoditra, mitombo ny fihomboan'ny volo, ny fatiantoka ny hoditra;
• kansera; na fanasitranana vaginal na fitsaboana.
Ity dia tsy lisitra feno ny voka-dratsiny ary mety hitranga ny hafa. Antsoy ny dokotera amin'ny dokotera momba ny fitsaboana. Azonao atao ny milaza ny vokatra hafa amin'ny FDA ao amin'ny 1-800-FDA-1088.
9. Disogestrel Poud Effect while breastfeeding
(1) Ny fiantraikany amin'ny zaza tsy ampy taona
Ny fianarana tsy mitombina sy tsy mandanjalanja dia nampitaha ny vovony 75 mcg oral desogestrel isan'andro (n = 42) mankany amin'ny fitaovana entrauterine (IUD; n = 40) nanomboka ny 28 ka hatramin'ny 56 andro postpartum for contraception. Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny lamosin'ny loha, na ny lanjany na ny biparietal loha dia hita taorian'ny 1, 4, ary 7 fitsaboana. Ny fitomboan'ny taovam-pananahana dia nitatitra tamin'ny zaza 2 ary nitombo ny hatsongo dia notaterina tamin'ny zaza 1 tao amin'ny tarika poezia desogestrel, raha oharina amin'ny tsy fahampian'ny vokatra voalaza tamin'ny zaza ao amin'ny vondrona IUD. Ny fitomboan'ny zaza sasany dia naverina indray tamin'ny 1.5 sy 2.5 taona; Tsy nisy fahasamihafana lehibe ara-pahasalamana hita.
Ny zaza tsy ampy taona (tsy mitonona anarana) dia nanamboatra volom-borona tamin'ny 4 volana. Nahazo izany ny reniny progestin, dydrogestrone, nandritra ny trimestre voalohany tamin'ny fitondrana vohoka ary nanomboka naka ny vovoka poezia 0.075 mg isan'andro ho toy ny fanabeazana manomboka amin'ny 3 volana postpartum. Ny reniny dia nampitsahatra ny vovo-dronono avy any an-kibo taorian'ny andro 28 ary ny volo somary voadio tamin'ny 11 volana. Ny dite desogestrel dia mety ho antony mahatonga ny fitomboan'ny volo amin'ny zaza.
(2) Ny fiantraikany amin'ny laktasy sy ny breastmilk
Ny fianarana tsy mitombina sy tsy mitombina dia nampitaha ny vovony 75 mcg oral desogestrel irery isan'andro (n = 42) mankany amin'ny fitaovana entrauterine (n = 40) nanomboka ny 28 ka hatramin'ny 56 andro postpartum for contraception. Nandritra ny vanim-potoana fitsapana nandritra ny 7 volana, ny vehivavy 1 dia nandao ny fitsarana noho ny fihanaky ny fihenan'ny lanjany raha oharina amin'ny vondrona IUD. Tamin'ny fiafaran'ny vanim-potoana fitsaboana voalohany sy fahefatra, dia tsy nisy fahasamihafana ny habetsahan'ny ronono vokarin'ny vovoka sy ny IUD. Tsy misy fahasamihafana amin'ny triglyceride, proteinina na ny votoatin-dronono misy laktose hita any amin'ny faran'ny 1, 4, ary 7 fitsaboana fitsaboana.
Ny fianarana tsy nahazo alalana dia nanaraka ny vehivavy 200 nomena mpanentana fanodikodinan'ny 75 mcg isan'andro ho an'ny 6 ho an'ny 6 volana manomboka amin'ny herinandro 200 herinandro ary nampitaha azy tamin'ireo vehivavy XNUMX izay nahazo toerana. Tsy nisy fahasamihafana hita teo amin'ny famokarana ronono na fivoaran'ny zaza sy ny fampandrosoana eo amin'ny tarika roa.
10. Desogestrel Pulver For Sale
(1) Loharano bebe kokoa momba ny mpamatsy solika avy any Desogestrel
(2) Buy Desogestrel Powder izao
• Google AASraw, midira ao amin'ny www.aasraw.com.
• Search Desogestrel Powder amin'ny AASraw
• Fantaro Desogestrel Powder windows XP, ary soraty ny requirmnets anao.
- Mahazo mailaka izahay ary miresaka bebe kokoa momba anao.
- Manamafy ny baiko, avy eo ny fandoavam-bola natao ary handamina ny entana ho anao ianao any aoriana.
(3) Andavantage ny Vidin'ny Buy Desogestrel Pulver From AASraw
1.High Quality amin'ny vidiny mirary:
1) Purity:> 99%
2) Mpanamboatra sy afaka manome vokatra avo lenta isika amin'ny vidin'ny vokatra.
2.Fahefana sy fialam-boly azo antoka:
1) Azo atao ny mandefa parcel amin'ny ora 24 ora aorian'ny fandoavana. Ny laharana tracking misy
2) Fandeferana azo antoka sy malina. Fomba fifindran'ny maro ho an'ny safidinao.
3.We manana mpividy manerana izao tontolo izao:
1) Ny serivisy matihanina sy ny traikefa ananan'olona dia mahatonga ny mpanjifa hahatsapa ho mamaivana, ny tahiry ampy sy ny fivoahana haingana dia mahafaoka ny faniriany.
2) Ny valin'ny tsena sy ny valim-panafody dia ho ankasitrahana, ny fanatontosana ny fangatahan'ny mpanjifa ny andraikitsika.
3) Ny kalitao avo lenta, ny vidin'ny fifaninanana, ny fanomezana maimaim-poana, ny serivisy voalohany dia ny fahatokisana sy fiderana avy amin'ny mpanjifa.
1) Fitaovam-pahasalamana: Fitaovana varotra, hiaro ny tsiambaratelon'ny mpanjifa. Ary raha ny marina dia miantoka ny hamindrana indray.
2) Tsy miova mihitsy: Ny vokatra dia hihazona fahamendrehana foana, tsy hiova, Ny kalitaon'ny orinasa no avo lenta.
3) Tolotra tsara: Ho haingana araka izay tratra hamahana ny olana ao an-trano, mba hahazoan'ny mpanjifa soa aman-tsara ny entana.
Tags: Buy Desogestrel powder, Vovon-drivotra desogestrel
Ampidiro ny anaranao. Mampidira adiresy mailaka valiny azafady. Mampidira hafatra.
Ity no zava-drehetra tokony ho fantatrao mikasika an'i Bortezomib Firy ny 4-DHEA miverina amin'ny testosterone?
Marshall on Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet
Felix on Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet
Vikram Parmar on Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet
admin, admin on Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet
Ny vokatra tsara indrindra
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny Sunifiram
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny Noopept
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny Bromantane
Fanontaniana 8 hanontany tena alohan'ny handraisanao ny vovony Cetilistat
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) ao amin'ny tsenan'i Armodafinil
Clenbuterol (CLEN) hodi-kazo HCL
Sibutramine hydrochloride poids
naoty 4 avy tany 5
Copyright © 2018 aasraw Ny zo rehetra voatokana. Designed by aasraw.com